ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ် Task Management Software ကို
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 30, 2010 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 30, 2010 Douglas Karr
ဒီအတိတ်စုံတွဲတွေသီတင်းပတ်ပေါင်းများစွာငါဆက်လုပ်ဖို့ရုန်းကန်နေရတယ်။ ငါမှာအနည်းဆုံးစီမံကိန်းတစ်ဒါဇင်၊ အနည်းဆုံးမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီ ၅ ခု၊ အချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်းနဲ့အချိန်ပိုင်းအရင်းအမြစ် ၂ ခုရှိတယ်။ ငါရောင်းနေတုန်းပဲငါရောင်းလိုက်တဲ့ပရောဂျက်တွေကိုဆက်ပြီးလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အတွက်စီးပွားရေးအလုံအလောက်ရှိသည့်ထိုမသက်မသာအချိန်ရောက်နေပြီ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထိုအရင်းအမြစ်မရှိသေးပါ (သူသည်နှစ်ပတ်အတွင်းအစပြုသည်။ )
စနစ်တကျရဖို့ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တယ် အမှုအရာ စုံတွဲတစ်တွဲလအကြာ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပြက္ခဒိန်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော Mac အတွက်အလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဆော့ဝဲလ်ပါ။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကို backlog တစ်ခုဖန်တီးဖို့နဲ့ကျွန်တော့်အလုပ်ကို ဦး စားပေးဆက်လက်လုပ်ပေးဖို့တကယ်ကူညီပေးခဲ့တယ်။
ပြTheနာကတော့အဲဒါကောင်းရုံပဲ my အလုပ်။ ကျွန်ုပ်၏တာ ၀ န်အများစုသည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းတစ်ခုတည်းတွင်လုပ်ငန်းများစွာကိုဖြည့်ဆည်းရန်အဖွဲ့ ၀ င်မျိုးစုံလိုအပ်သည်။ ငါစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကိုမလိုအပ်ခဲ့ဘူး - ဒါက overkill ဖြစ်လိမ့်မယ်။ တာ ၀ န်တွေအားလုံးကိုခြေရာခံနိုင်ပြီး၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလုပ်ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်တဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်း application တစ်ခုပဲလိုတယ်။
အချိန်အတော်အတန်ကြာပေမယ့်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကို ၀ န်ဆောင်မှုအဖြေတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ HiTask.
HiTask လုပ်ငန်းများကို ဦး စားပေး၊ နေ့၊ စီမံကိန်း၊ သို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်အလိုက်ခွဲခြားရန်ခွင့်ပြုသည်။ အလုပ်တစ်ခုစီကို tag လုပ်ပြီး task list ကိုချက်ချင်းစီစစ်နိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ စီးပွားရေးအကောင့်သည်တစ်လလျှင် ၁၅ ဒေါ်လာသာဖြစ်ပြီးသင့်ကိုတံဆိပ်ခွဲခွဲဒိုမိန်း၊ သင့်လိုဂိုကို ၂၄ နာရီပံ့ပိုးမှုနှင့်သင်၏အလုပ်များနှင့်စီမံကိန်းများကိုမျှဝေရန်စွမ်းရည်ရှိသည်။
HiTask အတွက်တစ်ခုတည်းသောဆန္ဒ Droid application တစ်ခု (သူတို့မှာ iPhone app ရှိပြီးသား) သို့သော်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁၅ ဒေါ်လာဖြင့်၎င်းသည်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Tags: ကြော်ငြာအင်ဂျင်ကွန်ယက်ကွန်ယက်အပ်နှင်းမြစ်ကြီးနားအီးမေးလ်နည်းဗျူဟာများကွန်ဖရရှာငါ့နေရာလူမှုရေးအစီရင်ခံခြင်းzoominfo ဒေတာန်ဆောင်မှု
1:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 25
ငါလိုက်နာခဲ့တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောအကြံပေးသူတိုင်းကတူညီတဲ့အသံကိုကြွေးကြော်ကြသည်။ ” သင်၏အီး - ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအလုပ်တွင်သင်ချက်ချင်းအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုသင်လုံးဝမသေချာသည့်အရာအတွက်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပိုက်ဆံမဖြုန်းပါနှင့်!
ဤအမှု၌သင်တို့၏ ဦး ခေါင်း -up, ထပ်မံကျေးဇူးတင်စကား Doug ။ ငါတက်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီ! 😛
HiTask မှလှပသောဝဘ်ဒီဇိုင်း။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် task / project management tools များကိုပြန်လည်အကဲဖြတ်ခဲ့ပြီး spreadsheet (ပရောဂျက်များအတွက်) + RememberTheMilk (တာဝန်များအတွက်) ManyMoon သို့ပြောင်းခဲ့သည်။http://www.manymoon.com).
ManyMoon သည်အခြေခံအားဖြင့်အခမဲ့ (အကန့်အသတ်မရှိသောစီမံကိန်းများ) ဖြစ်ပြီးဂူဂဲလ်အပ်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ မျှော်လင့်ပါကငါ့ကိုလမ်းကြောင်းအပေါ်စောင့်ရှောက်မည်။
Interface ကရှည်လျားပေမယ့် RTM hotkeys တွေကိုငါလွမ်းနေတုန်းပဲ၊ သတင်းပို့ဖို့လိုနေသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါတွေကငါ Greasemonkey scripts ကိုရေးနိုင်တာပါ။ 😛
ဧပြီ 16, 2012 မှာ 9: 23 AM
ငါ HiTask မှစတင်ခဲ့ပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်း Comindware task management system သို့ပြောင်းရွှေ့သွားသည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့်အသင်းတစ်ခုတွင်သင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးအခြားအဖွဲ့ ၀ င်များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်များကိုမည်သို့မည်ပုံတွေ့နိုင်သည်ဆိုသည့်အချက်သည်သင့်အတွက်အချိန်ပိုရစေသည်။ ထို့အပြင်သင် docs များကိုစနစ်နှင့် ပူးတွဲ၍ Outlook နှင့် တွဲ၍ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။